महरा परिवारले रोल्पाको घर छोडेको अन्तिम रात ! « Dhankuta Khabar
महरा परिवारले रोल्पाको घर छोडेको अन्तिम रात !
मेरो भाई निर्माण, दाजु निर्मल र दिदी उन्नतिको पढाई बिग्रदै गयो । बुवा घरमा आउने स्थिति नै रहेन । दुश्मनले हप्तामा ३ पटकभन्दा बढी खानतलासी लिने गथ्र्यो । घरमा आमा र हामी चार भाईबैनी गरी ५ जनामात्रै थियौं ।
२०६२ बैसाख १३, गोठादी पाल्पा
पत्रकार डिल्ली मल्लको यादहरुबाट
चुम्लुङको पुनर्संरचना आजको युगिन आवश्यकता : अमर तुम्याहाङ
नाच, भाषण, राजनीति र ताम्सालिङ
एमालेसँगै पार्टी एकता गर्नु थियो भने किन जनयुद्ध लड्यौ कमरेड प्रचण्ड ?
‘भेडा भेडासँग र बाख्रा बाख्रासँग’ – यस्तो छ एमाले–माओवादी पार्टी एकतापछि बाबुरामको टिप्पणी…
‘हे दैव ! प्रधानमन्त्री ओलीलाई भक्तहरुबाट बचाउ !’
‘हावाबाट बिजुली भन्दा पहिला खान नपाएर हावा भरिएको जनताको पेट भर्नुस प्रधानमन्त्री ज्यु ‘- रबी लामिछाने